प्रहरीले किन लुकायो र्‍याल परीक्षणको रिपोर्ट ? | Ratopati
हेमकार परिवार हत्याकाण्ड फलोअप ५
मृतकका काका बलराम भन्छन्, ‘हत्यारा किशोरीलाल र दीपा नै हुन्’
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २३, २०७६ chat_bubble_outline1
बाँके, नेपालगञ्जको रानी तलाउबाट पूर्व एमपी स्कुलतर्फ जाने बाटोमा शान्तिमार्ग भन्ने बस्ती छ । नेपालगञ्ज नगारपालिकाको वडा नम्बर ८ को शान्तिमार्गमा सबैको पक्की घर छन् । तर त्यही शान्तिमार्गको ५ सय मिटरभित्र टिनको छाना भएको एउटा सानो घर छ । यो घर बलराम हेमकारको हो ।
कुनै समयका चर्चित अधिवक्ता, जिल्ला बार एसोसिएसनमा काम गरिसकेका बलराम प्राध्यपकसमेत हुन् । यद्यपि यतिबेला उनी ज्योतिषको काम गरिरहेका छन् ।
यी व्यक्ति हुन् नेपालगञ्जको चर्चित हेमकार परिवार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा किटानी जाहेरी दिने व्यक्ति अर्थात् बलराम हेमकार ।
उमेरले उनी यतिबेला ६५ वर्षका भए । कपाल र दाह्री फुलेर सेतै भए पनि बलराम अझै पनि आफ्ना आमा गुलाबदेवी, दाजु जगदेव हेमकार, भाउजू सीतादेवी हेमकार, भतिज दीपक हेमकार र घरमा काम गर्ने १५ वर्षीय किशोर राशनिश्चर चौधरीको हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही गराउने भन्दै लागिपरेका छन् ।
नेपालगञ्ज सदरलाइनको १४ वर्ष पुरानो हेमकार परिवार हत्याकाण्डका दोषी दीपक हेमकारको आफ्नै ससुरा किशोरीलाल सोनी र श्रीमती दीपा सोनी भएको भन्दै घटनाको ठीक दुई वर्षपछि अर्थात् २०६४ साल फागुन २४ गते मृतक दीपक हेमकारका काका बलराम हेमकारले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
सुरुमा आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर किटानी जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले लिन नमानेकाले उनले हुलाकमार्फत किटानी जाहेरी पठाएका थिए । त्यही किटानी जाहेरीमार्फत प्रहरीले किशोरीलाल सोनी र दीपा सानीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पहिले २०६४ साल फागुन २४ गते मृतक दीपक हेमकारका काका तथा जगदेव हेमकारका भाइ बलराम हेमकारले दिएको यो जाहेरी हेरौँ ।
बलरामको परिचय प्राध्यापक, अधिवक्तासँगै ज्योतिषी पनि हो । बलराम यी तीनवटा परिचयसँगै नेपालगञ्जको हेमकार परिवार हत्याकाण्डमा ५ आफन्त गुमाएका व्यक्ति पनि हुन् । आफन्तको हत्या गर्ने अपराधीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि निरन्तर लडिरहने परिपक्व व्यक्तित्व पनि हुन् उनी । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस बाँके र बबही बहुमुखी क्याम्पस बर्दियाका पूर्वप्राध्यापक समेत रहेका यी वृद्ध अचेल घरमै बसिरहेका हुन्छन् । रातोपाटीको टिम केही समयअगाडि नेपालगञ्ज पुग्दा उनी घरमै भेटिए ।
२०६२ फागुन २३ गते जिल्ला बाँके जिल्ला साविकको नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर १५ सदरलाइनमा आफ्नै घरमा जाहेरवालाको आमा गुलाबदेवी हेमकार, दाजु जगदेव हेमकार, भाउजू सीतादेवी हेमकार, भतिज दीपक हेमकार र घरमा काम गर्ने रामशनिश्वर खुना (चौधरी)को हत्या भएको थियो ।
हत्यासँगै तत्कालीन समयमै करिब २९ लाख रुपैयाँको सुन, चाँदी तथा अन्य धनमालसमेत लुटिएको थियो । हत्याकाण्डबाट पारिवारिक पीडामा परेका बलरामले अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनका लागि १३ वर्षसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गरेको रातोपाटीलाई बताए । १३ वर्षमा अभियुक्त पक्राउ गरे पनि त्यसको करिब १ वर्ष नपुग्दै अभियुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट छुटाइएपछि भने उनमा झन् पीडा थपिएको छ । अब अपराधी नै पत्ता नलाग्ने वा अपराधी ठहर भए पनि नेपाल ल्याउन नसकिने हो कि भन्ने त्रास बलराममा रहेको छ । यद्यपि न्याय नपाउन्जेल लडाइँ जारी राख्नुको विकल्प नभएको भन्दै मर्ने बेलासम्ममा पनि लडिरहने उनी बताउँछन् ।
हेमकार परिवार हत्याकाण्ड फलोअप शृङ्खला
१३ वर्षमा समातिएका हत्या आरोपीलाई सर्वोच्चले ९ महिनामै ‘छाड्यो’ !
हेमकर परिवार हत्याका आरोपी किशोरीलालको अपराधकर्म : उदयदेखि वर्तमानसम्म
हेमकर परिवारको सामूहिक हत्याकाण्ड : भारतीय अभियुक्त पक्रन २ वर्षसम्म ठेलामा तरकारी बेचे नेपाली प्रहरीले
प्रहरीले स्यालिभा (र्याल) टेस्टको रिपोर्ट कहाँ लुकायो ?
जतिबेला हत्याकाण्ड भयो र अपराधीबारे कुनै सुराक पत्ता लागेन, त्यतिबेलासम्म बलराम हेमकार पनि चुपचाप बसिरहेका थिए ।
जब दीपककी श्रीमती दीपाको गतिविधि शङ्कास्पद देखिन थाल्यो र धनमाल पनि धमाधम बिक्री हुन थाल्यो, बलराममा आशङ्का र डर पैदा हुन थाल्यो ।
घटनाबारे के भइरहेको छ भन्दा निरन्तर ‘अनुसन्धान जारी’को जवाफ मात्रै आइरह्यो । यद्यपि उपलब्धि भने शून्यप्रायः नै थियो । यतिसम्म कि अपराधीप्रति सङ्केतसम्म प्रहरीले गरेन ।
अधिवक्तासमेत रहेका बलरामका अनुसार अपराधीले जति चलाखीपूर्ण तबरले अपराध गरेको भए पनि उसले केही न केही प्रमाण वा सुराक भने छाडेकै हुन्छ ।
नेपालगञ्जका हेमकार परिवारको हत्याकान्डमा पनि अपराधीले एउटा महत्त्वपूर्ण सुराक अर्थात् प्रमाण छाडेको थियो । घटनास्थलका विभिन्न स्थानमा गुट्खा खाएर थुकेको र गुट्खाको फोहोर र २७ प्याकेट गुट्खा फेला परेको थियो ।
त्यो गुट्खा अपराधीकै भएको जाहेरवाला बलराम हेमकारको दाबी छ । किनभने दीपक हेमकारको परिवारमा गुट्खा खाने कोही व्यक्ति थिएनन् । त्यसकारण पनि पाहुना बनेर आएका अपराधीले नै गुट्खा ल्याएको, खाएको बलरामको दाबी छ ।
तर बाँकेको तत्कालीन प्रहरी प्रशासनले त्यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्रमाणलाई गायब बनाउनतिर लागेको र मुचुल्का नै गायब पारेको बलरामको आरोप छ ।
किनभने त्यही गुट्खाको प्याकेटमा अपराधीको औँलाको छाप (फिङ्गरप्रिन्ट) लिन सकिन्थ्यो भने अझै महत्त्वपूर्ण खाएर थुकेको गुट्खामा रहेको स्यालिभा (र्याल) बाट अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो । र्यालको नमुना लिएर राख्दा पछि अभियुक्तको र्यालसँग म्याचिङ गराउन सकिने ठूलो प्रमाण हुन्थ्यो । तर त्यसलाई प्रहरीले आफ्नो सबुत प्रमाणमा नै राखेन ।
अधिवक्तासमेत रहेका बलरामले त्यो प्रमाणलाई सुरक्षित राखेका थिए । प्रहरीले त्यो प्रमाणलाई महत्त्व नदिएपछि उनी आफै नमुना बोकेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पुगे । त्यो रिपोर्टसमेत बलरामले प्रहरीलाई दिए र निरन्तर अपराधी पक्राउ गर्न प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहे । बलरामको त्यो रिपोर्ट अपराधी पत्ता लगाउने महत्त्वपूर्ण सुराक हुन सक्थ्यो ।
गोमती गुड्खा नै किशोरीलालको अपराधको पहिलो प्रमाण
जतिबेला नेपालगञ्जमा हेमकार परिवारको हत्या भएको थियो, त्यतिबेला नेपालगञ्ज आसपासमा गोमती गुड्खाको प्रयोग खुबै बढेको थियो । यद्यपि हेमकार परिवारका कसैले पनि उक्त गुट्खा खाने गरेका थिएनन् । तर दीपक हेमकारका ससुरा तथा दीपा सोनीका बुवा किशोरीलाल सोनी भने गोमती गुट्खाका अम्मली रहेका थिए ।
तर हत्याकाण्डका समयमा घरमा गोमती गुट्खा खाएर थुकिएको थियो भने २७ वटा पोका पनि छाडिएको थियो । तर प्रहरीले त्यो गुट्खा कसले खायो, किन खायो र गुट्खा र हत्याको कनेक्सन कहाँ छ भनेर खोजबिन गर्नसमेत चाहेन । जबकि त्यो महत्त्वपूर्ण प्रमाण थियो र त्यसलाई प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने थियो । जहाँ परागमा रहेको स्यालिभा अर्थात् थुकको माध्यमबाट सहजरूपमा तत्कालै अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो ।
तर उक्त प्रमाणलाई न प्रहरीले थप खोजबिन गर्यो, न त बलरामलाई नै उक्त रिपोर्ट दिइयो । करिब एक वर्षसम्म प्रहरीले उक्त रिपोर्ट गायब नै बनायो । बलराम आफैँ काठमाडौँ पुगेर रिपोर्ट माग गर्दा पनि दिइएन । धेरै मिहिनेत र दबाब दिएर त्यो रिपोर्ट बलरामले नेपालगञ्ज ल्याएका थिए । त्यही नै हत्यामा किशोरीलालाको संलग्नता थियो कि थिएन भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण बन्न सक्थ्यो ।
प्रहरीले लुकाएको थियो स्यालिभा टेस्टको रिपोर्ट
प्रहरीले अनुसन्धान गरी १ सय २२ पेज लामो मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो । तर घटनाको १३ वर्षमा पेश गरिएको उक्त मिसिलमा पनि एक पेजको स्यालिभा टेस्टको रिपोर्ट भने गायब थियो । पुरानै प्रहरी अधिकारीले, उक्त रिपोर्ट गायब पारेको बलरामको दाबी छ । बलरामको दाबी छ कि अनुसन्धानबाट किशोरीलाल सोनी दोषी देखिने भएपछि मिलेमतोमै तत्कालीन प्रहरी प्रमुख शिव लामिछानेले उक्त रिपोर्ट गायब पारेका थिए । अपराधी किटान नगराउन तथा अनुसन्धानमा प्रभाव पार्नका लागि मिलेमतोमै उक्तको ल्याब टेस्ट गायब पारिएको बलरामको आरोप छ ।
अपराधी पत्ता लगाउन अरू के–के गरे बलरामले ?
सुरुमा प्रहरीको टाउको दुखाइको विषय बनेको हेमकार परिवार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा प्रहरीले लामो समयसम्म पनि कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
दीपा सोनी (हेमकार) र निजको बाबु किशोरीलाल सोनीसमेतले सम्पत्ति लिन तथा खानका लागि एक आपसमा मिलेमतो एवम् योजना बनाई नियोजित तवरले अन्य ४, ५ जना व्यक्तिहरु समेतलाई साथ ल्याई धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरेको बलरामलाई सुरुदेखि नै आशङ्का रहेको थियो ।
यो कुरा उनले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई पनि भनेका थिए । तर प्रहरी अधिकारीहरुले यस विषयमा चासो नै दिएनन् । अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने बलरामको प्रश्नमा प्रहरीको रेडिमेड जवाफ ‘अनुसन्धान हुँदै छ’ मात्रै आउने गर्थ्यो ।
प्रहरीले किटानी जाहेरी नै लिएन
जब किशोरीलाल र दीपा सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरी भारत जान खाजे, बलरामले अपराधी ती आफन्त नै हुन् भन्दै प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन पुगे । हत्याकाण्डको २ वर्षपछि २०६४ साल फागुन २४ गते बलराम हेमकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा भारत लखउनका किशोरीलाल सोनी र दीपा सोनीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन नै चाहेन ।
बाँकेका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कार्यालयमा थिएनन् । प्रहरी निरीक्षकले जाहेरी लिनै मानेनन् । त्यसपछि अनि कानुन जानेका बलरामले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत किटानी जाहेरी पठाए । त्यसको १५ दिनपछि उनलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर किटानी लिएको ठीक साँचो भन्दै हस्ताक्षर गराइएको थियो । किटानी दिए पनि बलरामले प्रहरीलाई ताकेता गर्नेदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पहुँच पुर्याउँदै छानबिन गर्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए ।
फागुनमा मुद्दा दायर, चैतमा दीपा फरार
२०६२ फागुन २३ गते बाँके जिल्ला नेपालगञ्जको सदरलाइनमा हेमकार परिवारको हत्या भयो । हत्याको लगत्तै दीपक हेमकारको नाममा रहेको सम्पत्ति हडप्न दीपा सोनी र उनका बुबा किशोरीलाल सोनी लागिपरेका थिए ।
त्यो सबै ‘चलखेल’ बलरामले थाहा पाए । त्यति बेलासम्म प्रहरीले पनि उनीहरुमाथि शङ्का र अनुसन्धान गरेको थिएन । सबै सम्पत्ति बेचेर भारत जान लागेको थाहा पाएपछि बलरामले २०६४ साल फागुन २४ गते प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमा बलरामले सम्पत्ति रोक्का गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
तर किटानी जाहेरीपछि पनि प्रहरीले दीपालाई नियन्त्रणमा लिएन । त्यतिबेलासम्म किशोरीलाल सोनी भने भारत पुगिसकेका थिए । प्रहरीले समयमै सम्पत्ति रोक्का नराख्दा र दीपालाई नियन्त्रणमा नलिँदा दीपा पनि सबै सम्पत्ति बेचेर त्यसको १५ दिनपछि चैतमै दीपा पनि माइती भारतको लखनउ पुगिन् र कहिल्यै नेपाल फर्किनन् ।
किशोरीलाल सोनी र दीपा सोनीमाथि किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले सोधपुछ सुरु गरेको थियो । त्यसै समयमा दीपाले लखनउमा रहेका आफ्ना बुबालाई फोन गरी ‘पुलिसको जानकारी मिलचुकी है, वापस मत आना । मुझे रोज बुलाके पुछताछ हो रही है । मैं यहाँका प्रोपर्टी जल्दी बिक्री करके आउङ्गी’ भनेको फोन धनीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरीले लामो अनुसन्धान र प्रयासपछि हत्यामा संलग्न किशोरीलाल सोनी र दीपा सोनी नै भएको ठहर गर्दै प्रहरीले किशोरीलाल सोनीलाई लखनउबाट अपरहणको शैलीमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याई २०७५ साल कात्तिकमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि परिवारमा त्रास र निरासा
हत्याकाण्डको १३ वर्षपछि प्रहरीले धेरै दुःख र मिहिनेत गरेर किशोरीलाल सोनीलाई पक्राउ गर्दा परिवारले अब त न्याय पाइएला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।
किशोरीलाल सोनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि त अझ धेरै आस लागेको थियो बलराम र उनको परिवारलाई । तर असारको २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालै प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार ठहर गर्न नसकिने भन्दै साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिए । उक्त आदेशसँगै किशोरीलाल सोनी भारत पुगेर परिवार तथा साथीभाइलाई पार्टी दिए ।
यता पीडित परिवारका बलराम हेमकार, मृतक दीपकका दाजु तथा बहिनीमा भने झनै त्रास बढेको छ । अभियुक्त जेलबाट छुटेपछि आफूहरुविरुद्ध कुनै घटना गराउने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता र त्रास उनीहरुमा बढेको छ ।
घटनाका सम्बन्धमा रातोपाटीले कुरा गर्न खोज्दा मृतकका दाजु तथा बहिनीहरुले आफूलाई खतरा भएको भन्दै ‘बाँच्नु नै भाग्य’ भन्दै यस विषयमा मिडियासँग कुराकानी गर्न असमर्थ रहेको बताए ।
अधिवक्तासमेत रहेका बलराम हेमकार भने प्रहरीले २०६८ सालमा तयार गरेको कमजोर मिसिल मात्रै हेरेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको र प्रहरीको पूरै मिसिल अध्ययनसम्म नगरेको आरोप लगाउँछन् ।
के हुँदैछ जिल्ला अदालतमा
जिल्ला अदालत बाँकेका स्रेस्तेदार यदुराम शर्माले अदालतले मुद्दाको फैसला गरिनसकेको बताए । किशोरीलाल सोनीलाई जिल्ला अदालत बाँकेले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको बताए । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएका सोनीलाई उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।
तर जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध गएको चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका सोनीलाई सर्वोच्च अदालतले भने साधारण तारेखमै छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
Aug. 9, 2019, 10:38 a.m. Nepali
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारी thikkai cha..Paisa nai khayera chodeko ho tmi haru le...Paap ra punya yei kaliyug ma milcha re...Tmi haru ko paap ko asar ta yei juni ma pakkai dekhincha, plus tmi haru ko7pusta lai kaile ramro nahos..yei cha suvakamana mero..jatha bhrastachari haru